विशेष मतगणना सुरु हुनै लाग्दा बाबुराम र नारायणकाजी कहाँ के गर्दैछन् ?
Ujyaalo शुक्रवार, मंसिर २२, २०७४ ०४:०३:००
किरण लाेहनी/उज्यालाे ।
गाेरखा, मंसिर २१ – पहिलो चरणको चुनाव भएकोमध्ये सर्वाधिक चासोपूर्वक हेरिएको गोरखाको मतगणना सुरु हुँदैछ । चुनावी प्रतिस्पर्धा र त्यसको नतिजा सबैक्षेत्रको उत्तिकै चासो विषय हुने भएपनि गोरखाको क्षेत्र नम्वर २ लाई भने पहिलो चरणमा चुनाव भएकामध्ये देशविदेशमा चासोपूर्वक हेरिएको छ ।
मंसिर १० मा आ आफ्नो मतदान केन्द्रमा भोट हालेर भोलिपल्टै काठमाडौं हान्निएका भट्टराई र श्रेष्ठ मतगणना हुने आजको दिनसम्म जिल्ला फर्किएका छैनन् । मतपेटीका ब्यवस्थापन, उम्मेद्वारहरुविचको छलफल लगायत उपस्थित हुनुपर्नेजस्ता काम प्रतिनिधिमार्फत गराएका उम्मेद्वारद्धय श्रेष्ठ र भट्टराईको मनमा सम्भावित नतिजाबारे के कस्ता कुरा आउँदो हो ? नेता कार्यकर्तादेखि सर्वसाधारणसम्मले चासोपूर्वक हेरेको उनीहरु प्रतिस्पर्धी रहेको क्षेत्रको मतगणना शुरु हुनै लाग्दा उनीहरु कहाँ के गर्दै छन् ? हामीले दुबै नेतालाई साँझको ५ वज्न केही मिनेट बाँकी छँदा टेलिफोन सम्पर्क गरेका थियौं ।
साँझ साढे चार बजेतिर टेलिफोन सम्पर्क हुँदा भट्टराईले काठमाण्डौं विशालनगरस्थित निवासमा पुराना पत्रपत्रिका पढेर बसिरहेको बताउनुभयो । नियमित अखवार पढ्ने बानी भएपनि चुनावी व्यस्तताले गर्दा झण्डै एक महिनायताको अखवार पढ्न नपाएको उहाँले बताउनुभयो ।
राजनीतिक घटनाक्रम निकै अघि बढिसक्दा किन पुराना अखवारमा ध्यान ? उज्यालोको प्रश्नमा उहाँले भन्नुभयो, “त्यतिबेला आफ्नो बारेमा कसले के भनेका रहेछन् भनेर थाहा पाउँदा भोलिका दिनमा सजिलै हुन्छ, हामी इतिहासको समीक्षा गर्दै अघि बढ्ने त हो नि ।” आजदेखि मतगणना शुरु भएपनि भट्टराई भने भोलि मात्रै गोरखा आउनु हुने भएको छ ।
अन्तिम नतिजा आउञ्जेलसम्म जिल्लामै बस्ने नबस्नेबारे भने प्रारम्भिक नतिजा बुझेर निर्णय गर्ने उहाँले बताउनुभयो । भोलि बिहानसम्मको नतिजा बुझेर छिट्टै गणना सकिने भए जिल्लामै बस्ने उहाँको भनाई छ ।
मतदानपछिको ११ दिनसम्म सम्भावित नतिजाबारे भट्टराईको मनमा के कुरा खेल्यो होला ? हाम्रो अर्को जिज्ञासामा उहाँले भन्नुभयो, “हैन, मैले यसबारे कुरै सोच्न भ्याइन, चुनावमा हारजित हुन्छ, लोकतन्त्रमा यसलाई सामान्य रुपमा लिनुपर्छ ।” नेता कार्यकर्ताले सम्भावित नतीजाबारे लेखाजोखा सुनाउने गरेपनि दोस्रो चरणको चुनावको ब्यस्तताका कारण पर्याप्त ध्यान दिन नपाएको भट्टराईले बताउनुभयो ।
भोट खसालेको दिन अर्थात भंसिर १० गते साँझै काठमाडौं फर्किएका भट्टराईका प्रतिस्पर्धी नारायणकाजी श्रेष्ठ प्रकाश लगत्तै अस्पताल भर्ना हुनुभयो । अहिले पनि उपचार गराइरहनुभएका श्रेष्ठसँग सिधा सम्पर्क त हुन सकेन, तर उहाँका स्वकीय सचिव सुरेशकाजी श्रेष्ठका अनुसार पूर्ण रुपमा स्वस्थ नभैसकेकाले उहाँको मतगणनाका क्रममा जिल्ला आउने कुनै कार्यक्रम रहेको छैन ।